Isazi Khuluma: Amathoyizi Ahamba Phambili Afundisa Ingane Yakho Encane Nemvelo - Ukuba Ngumzali
Lapho kuzalwa indodakazi yami, ngangazi ukuthi ngifuna ukuyikhulisa ngengqondo ngamathoyizi ambalwa namathuluzi akhuthaza ubuciko, futhi nginomusa kwimvelo. Ukuzingela kwami ​​lamathoyizi kungiholele ekutholeni imikhiqizo eminingi emisha eyenziwe ekhaya eyenza amathoyizi aseMontessori nawaseWaldorf ayenentengo ephansi, enziwa eNdiya futhi enziwa esebenzisa izinto zemvelo. Ngingumthandi omkhulu wamathoyizi avulekile, lawo angasetshenziswa ngezindlela eziningi, ezingapheli futhi asize ukuthuthukisa umcabango wengane futhi akhule nengane yakho encane. Ngigqugquzela abantu ukuthi batshale imali kumathoyizi afana nePikler Triangle, Balance Board, Puzzles Wooden kanye nengikuthandayo uqobo — isethi yetiye eyenziwe ngokhuni elenzelwa iphathi yetiye ekhethelo yengane yami nonodoli bayo.
Namuhla, i-India izishaya isifuba ngamathoyizi athile amnandi afana namazinga aphakeme ekhwalithi nokuphepha. Kuyamangaza ukubona abazali bekhetha amabhlogo okhuni, amapuzzle nodoli bezindwangu kunamapulasitiki nalawo asebenza ngamabhethri. Ukuvalwa kukhuthaze nabazali ukuthi batshale imali kumathoyizi afana nePikler Triangle neRamp esiza izingane ukuthi zihlale zikhuthele futhi zithuthukise ukuqwashiswa kwendawo ngokuphepha kwamakhaya azo. Bayanda abazali abashintshela ekushintsheni izindwangu njengenye indlela enobungane, kunoshintsho endleleni thina mzali namuhla.
Kunemikhiqizo engaphezu kwekhulu eyenziwe ekhaya enamanani entengo amahle, amaloli, okwenziwa kokugcina, amabhlokhi, ama-rattles namanye amathoyizi avela ezintweni ezenziwe kabusha noma zemvelo. Abathengisi bethu bahlanganisa amathoyizi ezemfundo enza ukufunda ngokudlala kube yinto ekhumbulekayo kubo bobabili abazali nezingane zabo. Siphathe imikhiqizo engaphezu kuka-3,000 emangalisayo kuwo wonke amabanga entengo enza ukufunda kube mnandi kakhulu. Ezinye zazo zifaka:
1.I-Pikler Triangle neRamp: Kulula ukugcina, lokhu kunikeza ingane yakho indawo yokukhuphuka, islayidi futhi ifunde konke kokukodwa.
2.Amabhulokhi wezinzwa: Ithuluzi elihle lokuthi izingane zifunde ngomsindo nokukhanya.
3. Yenzani Dlala Amathoyizi: Amasethi odokotela, amaloli enziwe ngokhuni, izimoto namasethi wetiye.
Isine. Thinta futhi Uzizwe Mat: Indlela enhle yokusiza ingane yakho ithuthukise izinzwa zayo zokuthinta nokuzizwa.
5. Amakhadi emakhadi Nginomama abalindayo abafaka lokhu ohlwini lwabo ukuze bafundise izingane zabo kusukela ngosuku lokuqala.
6. Amathoyizi Avulekile njengezitaki zothingo, ibhodi eligobile kanye nezihlahla ezincane zokhuni.
7.Puzzles Ngokhuni: Lokhu kwenziwa ukukhuthaza ingane yakho ukuthi icabange futhi ixazulule inkinga, konke ngenkathi kuzijabulisa.
8.Indwangu Amathoyizi Nodoli: Isikhathi sokudlala simnandi kakhulu nabangani noma ngabe uzijwayeza ukuqhela kwezenhlalo.
9. Amatende, amaTepees Namasethi Wekhishi, Izithelo Zokhuni Namatshe Nemifino: Lokhu kusiza izingane ekwakhiweni nasekuhlanganyeleni.
10. Umbhoshongo Wokufunda: Lokhu kusiza ukuhlomisa nokunika amandla ingane ukwenza imisebenzi yansuku zonke kalula.
11. Amakhithi we-DIY amahle ezinganeni, izingane zasesikoleni kanye nezingane zasesikoleni samabanga aphansi ezibafundisa izingqikithi ezinjengezwe elingaphansi kwamanzi, imikhosi ngisho nemisebenzi yezandla efana noMadhubani noWarli.
Abazali ezweni lonke kumatrosi nakulona kanye idolobha elilodwa basebenzisa indlela yaseMontessori neWaldorf ekhaya futhi baphatha izingane njengabantu abancane abayibo. Kungakhathaleki ukuthi bayababandakanya emisebenzini yansuku zonke yasekhaya noma ukubenzela uhlobo lomshanelo ukuze bababandakanye, abazali bayabona ukuthi izingane zifunda ngayo yonke into eziyibonayo, eziyenzayo nezizwayo, futhi isizukulwane sethu sinenhlanhla eyanele yokuthola i-heirloom enhle amathoyizi, imikhiqizo enobungani bemvelo eyenziwe ngokuziqhenya eNdiya.
Funda futhi: Umhlahlandlela Wakho Wokukhetha Imikhiqizo Yokunakekela Efaneleke Kakhulu Yengane Yakho
ungalawula kanjani ukuwa kwezinwele
izinwele zilawulwa kanjani ekhaya
ikhambi elingcono kakhulu lokwehla kwezinkani nokuwa kwezinwele
kanjani ukususa unomphela izinwele ebusweni
i-yoga asanas enezithombe nezinzuzo